MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA: Miantoka ny fahasalamana ny sakafo azo antoka.
ACTUALITE/ Economie/ SANTE/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA oely Nirina RAKOTOVAO RAVAHATRA	0 Commentaire nov 18, 2017
Ahitana fivarotana sakafo isan-karazany manaraka ny fenitra takiana, toro-hevitra momba ny fahasalamana mifandraika amin’ny fihinana sakafo ny hetsika natokana ho fankalazana ny androm-pirenena ho fampiroborobobana ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao. Hifarana androany 18 novambra 2017, eny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity andiany faharoa ity.
Misoroka ny fanapoizinana ara-tsakafo ny fahazoan-dalana hamatsy sakafo. “Tokony mahazo certificat de consommabilité avy any amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ireo mpisehatra momba sakafo vao manaparitaka ny vokatra eny amin’ny tsena”, hoy ny Tale misahana fitsirihana ny antoka ara- pahasalamana sy ny kalitaon’ny sakafo, Joely Nirina RAKOTOVAO RAVAHATRA.
Voakasika izany avokoa na ny vokatra hafarana any ivelany na vokarina eto an-toerana. Ho famporisihana ireo mpisehatra hanaraka ny fenitra amin’ny fikirakirana ny sakafo sy ny fampahafantarana ny vahoaka fa sakafo ara-pahasalamana, nohamafisina nandritra ny androm-pirenena ho fampiroboroboana ny sakafo azo antoka sy tsara kalitao izany.
‹ FAHASALAMAM-BAHOAKA: Misoroka ny aretina avy amin’ny sakafo ny fanarahana ny fenitra.	› KOPIKOLE ET DECOUVERTE MADAGASCAR: Kopikolé Tahiry et Tsilira tiennent la place des lauréats.